Iilensi zikaGoogle ziqala ukufikelela kwiifowuni ezifanelekileyo ze-Android | I-Androidsis
Iilensi zikaGoogle zanda kuzo zonke iifowuni ezixhaswayo ze-Android
Sekulithuba noko oko Zonke iindaba zokuba iGoogle Lens izakusishiya zanikezelwa. Phakathi kwabo sifumana imisebenzi enjengokwamkelwa kwento enexesha lokwenyani. Iimpawu ezithembisayo abasebenzisi be-Android abanqwenela ukuzisebenzisa. Oku kuthathe ixesha nangona. Kodwa kubonakala ngathi ngokuthe ngcembe baqala ukufikelela kwiifowuni ezifanelekileyo.
Kuba iilensi zikaGoogle zanda ngakumbi. Ke iifowuni ezihambelanayo ziya kuba nakho ukonwabela kwiintsuku ezimbalwa ezizayo, ukuba akunjalo, ezinye zeempawu ezintsha ezizayo. Nangona kubonakala ngathi okwangoku ayizukufumaneka yonke.
Uhlaziyo lweelensi zikaGoogle zifike ngendlela egxadekileyo. Ekuqaleni, eminye imisebenzi ifikelele kwiimodeli ezithile, kodwa ibingaziwa ngokukodwa ukuba zeziphi iifowuni okanye ukuba zingaphi eziya kufumana zonke ezi ndaba. Okokugqibela, kubonakala ngathi bayanda ngakumbi.
Kuba ukwanda kweelensi zikaGoogle sele kuyinyani kwaye kufikelela kwizixhobo ezininziKe ukuba ifowuni yakho iyalixhasa eli nqaku, uMncedisi kaGoogle kufuneka akwazise kungekudala. Kungekudala uya kuba nethuba lokumisela iilensi kwifowuni yakho ye-Android. I icon iya kuvela kwikona esezantsi ngasekunene kwewizard ukukunceda wenze oku.
Nangona, njengesiqhelo kuhlaziyo lwenkampani, alukafiki eSpain. Kusenokuthatha iintsuku ezimbalwa ukufika kwilizwe lethu ngokusemthethweni. Ubuncinci ukuba sithathela ingqalelo isantya esiqhelekileyo sohlaziyo lwebrand. Kodwa sele ifikelela kwiimarike ezininzi. Ke sele siyazi ukuba isemthethweni.
Olu lwandiso lunokunceda iilensi zikaGoogle zifumane ubukho ngakumbi. Kungenxa yokuba yenye yezona projekthi zinomdla kuphawu lwentengiso, kodwa ayikaphuhliswa okanye ibalulekile.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Ukusetyenziswa kwe-Android » Iilensi zikaGoogle zanda kuzo zonke iifowuni ezixhaswayo ze-Android
I-Huawei Watch 2 (2018): Umlindo omtsha nge-Wear OS